Mitsitsia toerana amin'ny kapila misy Disk Cleanup Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
Tsotra ihany ny fikojakojana ny Mac antsika, satria raha tsy misy asa na fialamboly dia mametraka rindrambaiko tsy tapaka isika ary manafoana azy ireo, tsy mila fananganana lehibe izany.
Na eo aza izany dia tsy maintsy manana programa eo an-tanana mandrakariva izay mendrika fahatokisana isika ary manampy antsika amin'ny fanadiovana ny kapila mangarahara. Miresaka cache, rakitra alaina izahay fa "hadino", fampidinana tsy feno na programa tsy ampiasainay intsony. Raha izany dia, mila «iray manontolo» isika mba hanamorana ny asantsika. Ohatra iray amin'izany ny Disk Cleanup Pro ary maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Ny zavatra voalohany ataon'ny fampiharana aorian'ny fihazakazahana dia fizahana ankapobeny amin'ireo ampahany hiasa. Izany hoe, Mizaha ny fitadidiantsika amin'ireo ampahany lafo vidy azontsika esorina. Avy eo, mampiseho amintsika ny toerana tokony diovina amin'ny faritra 4: cache, hazo, fitoeram-bokatra ary fampidinana tsy nahomby.
Ankasitrahana izany tIreo fampahalalana rehetra ireo dia aseho aminay amin'ny fomba mahafinaritra tokoa, miaraka amin'ny bara miaraka amina data sy loko solontena. Mikasika ireo loko ireo, raha heverin'ny rafitra fa ny iray amin'ireo masontsivana ireo dia manana "fako" be dia be voatahiry izay afaka mampiadana ny rafitray, dia haseho azy amin'ny loko mena sy mavo raha ny asa no antonony sy maitso na mangarahara raha ny isan'ny singa ny mamafa dia mitombina.
Fa Disk Clean Pro dia azo alamina tanteraka, afaka mihetsika amin'ny faritra manokana toy ny mpizaha na amin'ny rakitra lehibe kokoa izay mitana ampahany lehibe amin'ny fitadidiantsika. Manome antsika asa hafa koa izy io, toy ny fampiharana ary hametraka uninstall manager hizaha toetra ny fampiharana ary raha tsy sitrakay izany dia esory na dia ny antsipiriany kely indrindra aza. Hankasitraka an'io lafiny io izahay rehefa nampiasaina nandritra ny volana maro ny Mac, amin'ny tsy famelana ireo rakitra afaka mampihena ny fahafahan'ny rafi-piasanay.
Amin'izany rehetra izany dia zava-dehibe ny hanomezana an'ity fampiharana maimaim-poana ity vintana handao ny fitadidiantsika toy ny fiaramanidina volamena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Mitsitsia toerana amin'ny kapila misy Disk Cleanup Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
crazy1405 dia hoy izy:
Talohan'izay, ohatrinona ny vidin'ny fampiharana? Pejy mahafinaritra, tena misaotra anao aho noho ireo fampahalalana rehetra ireo, ary ny fomba fanombanako dia amin'ny fizarana sy famonoana ilay mpanakan-doka. Veloma finaritra.
Valiny amin'ny crazy1405